Avid သည် IBC2019 ရှိဗီဒီယိုနှင့်အသံအကြောင်းအရာဖန်တီးသူများအတွက်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းမှုများကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » IBC2019 မှာဗီဒီယိုနှင့်အသံအကြောင်းအရာဖန်တီးရှင်များအတွက် avid စျေး Reimagined ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ Post လုပ်ငန်းအသွားအလာ Solutions
IBC2019 မှာဗီဒီယိုနှင့်အသံအကြောင်းအရာဖန်တီးရှင်များအတွက် avid စျေး Reimagined ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ Post လုပ်ငန်းအသွားအလာ Solutions
မီဒီယာ Composer ပိုမိုအစွမ်းထက် MediaCentral နှင့်ဥရောပ TV နဲ့ရုပ်ရှင်ပညာရှင်များအဘို့အ premiering တီထွင်မှုတို့တွင်အချောမွေ့စွာ NEXIS cloud storage all-သစ်ကို
IBC Show ကိုမီးမောင်းထိုးပြထားသည်:
ဗီဒီယိုကိုဖန်တီးမှုများအဘို့, မီဒီယာ Composer 2019 မီဒီယာချမှတ်သူများလျှောက်လွှာစွန့်ခွာခြင်းမရှိဘဲအပြီးသတ်ဖြန့်ဝေဖို့ပထမဦးဆုံးအဖြတ်ကနေသွားရပေးနိုင်ပါတယ်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအဘို့, MediaCentral ရဲ့နောက်မျိုးဆက်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်သူတို့ရဲ့ content တွေကိုထွက်ရနှင့်၎င်း၏တန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်ဖို့အသင်းများကိုဖွ
အသံအသိုင်းအဝိုင်းအသစ်အများအတွက် လွန်စွာလိုလားသော S4 နှင့် လွန်စွာလိုလားသော S1 ထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင်များသေးငယ်အဆောက်အဦနှင့်စီမံကိန်းစတူဒီယိုများအတွက်စံပြဖြစ်ကြောင်းဖြေရှင်းချက်ရောနှောပေါင်းစပ်, အစွမ်းထက်သေးတတ်နိုင်သောအသံသည်
ဘာလင်တန်, Mass, - ။ IBC2019 မှာ, လွန်စွာလိုလားသော® (Nasdaq: လွန်စွာလိုလားသော) ပိုကောင်းဖန်တီးပူးပေါင်းနှင့်ယနေ့မီဒီယာဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူး၏စိန်ခေါ်မှုများနှင့်တွေ့ဆုံရန်သူတို့ကို enable လုပ်ဖို့ဥရောပရဲ့မီဒီယာလုပ်ငန်းတွေအသင်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအဘို့အက၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ် software နှင့်ဖြေရှင်းနည်းများတီထွင်မှုမှအပေါ်မီးမောင်းထိုးပြန်သွားလေ၏။ ဧည့်သည်များမှ လွန်စွာလိုလားသော'' s ကို (7.B55) ရပ်ဟာလုံးဝ reimagined မီဒီယာComposer®, MediaCentral®ရဲ့နောက်မျိုးဆက်က, All-သစ်ကိုတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ် လွန်စွာလိုလားသော S4 နှင့် လွန်စွာလိုလားသော S1 အသံထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင်များ, အ လွန်စွာလိုလားသော NEXIS | Cloudspaces SaaS သိုလှောင်မှုရာယဇ်, နောက်ဆုံးပေါ်FastServe®ဗီဒီယိုကဆာဗာများ, နှင့်ပိုပြီး™။ IBC2019 အဆိုပါ RAI အမ်စတာဒမ်မှာစက်တင်ဘာလ 13-17 ကျင်းပပါလိမ့်မည်။
"မီဒီယာဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးရေးကိရိယာများယခင်ကထက်ပိုခက်အလုပ်လုပ်ရမယ်ဒါကြောင့်ယနေ့အကြောင်းအရာဖန်တီးသူ, အသစ်သောပုံစံများနှင့်အတူမြင့်မားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဆန့်ကျင်ဘက်အစဉ်အဆက်-တင်းကျပ်ဘတ်ဂျက်နှင့်ကျယ်ပြန့်ဖြန့်ဖြူးဖြစ်ရပ်မှန်များရပါမယ်" ဟု Jeff Rosica, CEO ဖြစ်သူနှင့်သမ္မတမှာကပြောပါတယ် လွန်စွာလိုလားသော။ "ကျနော်တို့အစဉ်မပြတ်, ဖောက်သည်မျှော်လင့်ချက်ထက်ကျော်လွန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပေါ်နေသော သာ. ကြီးမြတ်ထိရောက်စွာများအတွက်အင်ဂျင်နီယာပိုပလက်ဖောင်းကိုဖြတ်ပြီးပို့, နှင့်ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်ပိုမိုထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။ IBC မှာကျနော်တို့နှင့်အတူပုံကိုသရုပ်ပြရန်မျှော်လင့် လွန်စွာလိုလားသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ပိုပြီးအကြောင်းအရာကယ်နှုတ်တော်မူခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏မြန်နှုန်းမှာဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ "
မီဒီယာ Composer 2019
IBC, မီဒီယာ Composer 2019 ၏ဥရောပပွဲဦးထွက်ခြေတစ်လှမ်း လွန်စွာလိုလားသော'' s ကိုယနေ့-နှင့်မီဒီယာထုတ်လုပ်သူများနက်ဖြန်မျိုးဆက်များအတွက် reimagined စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်စနစ်။ aspiring နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အယ်ဒီတာများ, အလွတ်များနှင့်ဂျာနယ်လစ်တစ်ဦးအသုံးပြုသူအသစ်အတွေ့အကြုံ, လာမယ့်မျိုးဆက်ကတဆင့်ပိုပြီးဖန်တီးမှုအလုပ်လုပ်နိုင် လွန်စွာလိုလားသော မီဒီယာဖြန့်ဝေအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အတူအင်ဂျင် 8K, 16K နှင့် HDR များအတွက်စွမ်းရည်နှင့်ထောက်ခံမှုပြီးသွားနှင့်ပို့နှင့်ကြီးမားသောအဖွဲ့များများအတွက်စိတ်ကြိုက်အခန်းကဏ္ဍ-based user interface ကို။ မီဒီယာ Composer 2019 နှင့်အတူတစ်အယ်ဒီတာအစဉ်အဆက်လျှောက်လွှာစွန့်ခွာခြင်းမရှိဘဲပေးပို့ဖို့ပထမဦးဆုံးအဖြတ်ကနေသွားနိုင်ပါတယ်။
IBC မှာ, လွန်စွာလိုလားသော အပါအဝင်လာမည့်မီဒီယာ Composer features နဲ့ updates များကိုတစ်အိမ်ရှင် preview ပါလိမ့်မယ်:
မီဒီယာ Composer များအတွက်နယူးထိန်းချုပ်မှု | အသုံးပြုသူတစ်ဦး၏အခန်းကဏ္ဍအပေါ်အခြေခံပြီးသော့ခတ်ချစွမ်းရည်နှင့်အတူမီဒီယာ Composer ရဲ့ UI နှင့်လုံခြုံမီဒီယာကို configure လုပ်ငန်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ
အသုံးပြုသူများကတစ်ကြိမ်မျိုးစုံကလစ်ပ်ရန်ဘင်ကော်လံအတွက်စာသားမလျှောက်ထားအရှိန်မြှင့်ဖို့ခွင့်ပြုလတံ့သော bulk Edit ကို,
မီဒီယာ Composer နှင့်ကို Adobe Premiere Pro ကိုအကြားပာဖလှယ်များအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါလုပ်ငန်းအသွားအလာ
MediaCentral | အယ်ဒီတာ့အာဘော်စီမံခန့်ခွဲမှု
လွန်စွာလိုလားသော MediaCentral တခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ် | ဘရောက်ဇာကို-based တည်းဖြတ်ရေး, ကွက်ကို, အသံထွက်မီဒီယာရှာဖွေမှု, နှင့်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များပါဝင်သည်တစ်ခုသန့်စင်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှု toolset ဝါကြွားတတ်ထားတဲ့အယ်ဒီတာ့အာဘော်စီမံခန့်ခွဲမှု။ လုံးဝမီဒီယာ Composer နှင့်အတူပေါင်းစည်းတဲ့အစွမ်းထက်သေးရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာ, မှတဆင့်နှင့် လွန်စွာလိုလားသော NEXIS®သိမ်းဆည်းခြင်း, content တွေကိုဖန်တီးသူ, တစ်ခုလုံး Post-ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာအရှိန်အဟုန်မြှင်လျင်မြန်စွာ browsing, ရှာဖွေ, သစ်ခုတ်ခြင်းနှင့်ဘယ်နေရာကနေမဆို multicamera ရိုက်ကူးစည်းရုံးရေးနိုင်ပါတယ်။
MediaCentral® MediaCentral 2019, တီဗီသတင်း, အားကစားနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများများအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့စုံဆုံး, မျိုးဆက်သစ်မီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာပလက်ဖောင်းနှင့်အတူရှေ့ဆက်မယ့်ခုန်ကြာပါသည်။ MediaCentral ထောင်ပေါင်းများစွာ-ရန်လွယ်ကူသတင်းအချက်အလက်မှဝင်ရောက်ခွင့်, မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် apps တွေရှိပါတယ်၏အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှဖောက်သည်များ-ကနေနှစ်ဦး၏အသင်းများကို enable လုပ်ဖို့ဒီဇိုင်းထားသည်, ဒါကြောင့်သူတို့ကပိုမြန်အရင်ကထက်သူတို့ရဲ့ content တွေကိုပတ်ပတ်လည်လှည့်နိုင်ပါတယ်။ IBC2019 မှာ, လွန်စွာလိုလားသော မီဒီယာထုတ်လုပ်သူများ, content တွေကိုဖန်တီးဂရပ်ဖစ်နှင့်တံဆိပ် add နှင့်ကြည့်ရှုမှုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ဝင်ငွေမောင်းထုတ်ရန်မျိုးစုံလူမှုရေးမီဒီယာနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အဆုံးရမှတ်မှလျင်မြန်စွာသတင်းနှင့်အားကစားဗီဒီယိုများထုတ်ဝေခွင့်ပြု MediaCentral ဌထုတ်ဝေသူ, Wildmoka စွမ်းအားဖြင့်ကမ်းလှမ်းအသစ်တစ်ခု SaaS, မိတ်ဆက်လိမ့်မယ်။
လွန်စွာလိုလားသော အစာရှောင်ခြင်း-turnaround နှင့်အလွန်အမင်းအကျိုးရှိစွာအဆုံးမှအဆုံးသို့သတင်း, အားကစားနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှု Workflows များအတွက် IBC မှာယင်း၏FastServe®ဗီဒီယိုကဆာဗာကိုပလက်ဖောင်းမှတိုးမြှင့်ကြေညာခဲ့သည်။ သုံးသေးငယ်-footprint ကို configurations, FastServe အတွက်သာရရှိနိုင် | စားသုံးမိ, တိုက်ရိုက် Edit ကိုများနှင့်ပလေးအောက်ကိုတင်းကျပ်စွာနှင့်အတူပေါင်းစည်းကြသည် လွန်စွာလိုလားသော NEXIS နှင့် MediaCentral နှင့်ပိုမိုမြင့်မားရုပ်သံလိုင်းအရေအတွက်နှင့်ချန်နယ်နှုန်းနိမ့်ခြုံငုံကုန်ကျစရိတ်ကိုထောက်ပံ့နေချိန်တွင်စားသုံးမိပါ, တည်းဖြတ်, နှင့်ပလေးအောက် Workflows အရှိန်အဟုန်မြှင်။
လွန်စွာလိုလားသော NEXIS | Cloudspaces
IBC မှဥရောပပွဲဦးထွက်ခြေတစ်လှမ်း လွန်စွာလိုလားသော NEXIS | ချောမွေ့စွာတိုးချဲ့နေဖြင့်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုထဲကစိတ်ဖိစီးမှုကြာပေးသော Cloudspaces ™, လွန်စွာလိုလားသော အလွယ်တကူစီမံကိန်းများကို parking နှင့် Backup လုပ်ဖို့မိုဃ်းတိမ်မှ NEXIS သိုလှောင်မှု လွန်စွာလိုလားသော NEXIS ထားတဲ့ workspace တွေကို။ တူညီသောအသုံးပြုခြင်း လွန်စွာလိုလားသော NEXIS Management Console, အသုံးပြုသူကအလွယ်တကူ activate လုပ်နိုင်ပါတယ် လွန်စွာလိုလားသော Auto-ပြဋ္ဌာန်းချက်သိုလှောင်မှု Microsoft က Azure ၏တန်ခိုးပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများမပြတ်မတောက်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ဒေသခံအာကာသကိုတက်လွတ်မြောက်စေဖို့, သတင်း, အားကစား, နဲ့ post-ထုတ်လုပ်မှုအသင်းများကိုလုံခြုံစွာမိုဃ်းတိမ်၌မီဒီယာသိုလှောင်နှင့်ပန်းခြံတစ်ခုလွယ်ကူသောလမ်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့မိုဃ်းတိမ်ကိုစီးထားတဲ့ NEXIS ဌ Cloudspaces ။
Pro ကို Tools များ 2019
ဒါ့အပြင် IBC မှာ၎င်း၏ဥရောပပွဲဦးထွက်အောင်တိုင်းအသုံးပြုသူ-ကနေပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂီတဖန်တီးသူနှင့်အယောင်ဆောင်အနုပညာရှင်တွေထိပ်တန်း echelon အသံ post ကိုပညာရှင်များနှင့်အင်ဂျင်နီယာများ-enable အရှိဆုံးအပေါ်ပိုပြီးဖန်တီးမှုပိုမြန်အလုပ်လုပ်နှင့်သူတို့ကိုရန်အဘို့အအာဏာနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင်ထားတဲ့ Pro ကိုTools® 2019 ဖြစ်ပါသည် ရှုပ်ထွေးသောစီမံကိန်းများ။ ထိုကဲ့သို့သောအသံ post ကိုထုတ်လုပ်မှုအဖြစ်မြင့်မားတဲ့လမ်းကြောင်း-count ကပတ်ဝန်းကျင်မှာ, Pro ကို Tools များထဲမှာအလုပ်လုပ်အသုံးပြုသူများအတွက် | အဆုံးစွန်™ယခင်ဗားရှင်းများထက် 50 ရာခိုင်နှုန်းပိုအသံတွေကို / အသံပုဒ်ကယ်တင်တတ်၏။ 384 ဤအခြေစိုက်စခန်းစကားသံကိုကန့်သတ်တိုး, Pro ကို Tools များအပြင် | အဆုံးစွန် software နှင့် HD native ဖောက်သည်နောက်ထပ် system ကို-on ကိုသုံးကဒ် Pro ကို Tools များနှင့်အတူတန်းတူနှုန်း 768 အထိရရှိနိုင်အသံများ၏အရေအတွက်ကိုတိုးလို့ရပါတယ် | HDX system ကို-နှင့်အတူ Pro ကို Tools များရဲ့ထို့အပြင် | Ultimate Voice ကို pack မှာ။
IBC မှာ, လွန်စွာလိုလားသော ပိုမိုမြင့်မားသောဗီဒီယိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ဘောင်နှုန်းထားများအသစ်ထောက်ခံမှုအပါအဝင် Post-ထုတ်လုပ်မှုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များများအတွက်လာမည့် features အသစ်, preview ပါလိမ့်မယ်။ မီဒီယာ Composer အတွက်တူညီတဲ့အကြောင်းအရာ repurpose နိုင်စွမ်းသိသိသာသာအဆုံးမှအဆုံးသို့အသံ Post-ထုတ်လုပ်မှု Workflows streamlining နှင့်အချိန်နှင့်ငွေကုန်ကြေးကျသိုလှောငျချွေတာ, transcoding နှင့်ဖိုင်ပုံစံသို့မဟုတ် resolution ကိုကူးပြောင်းဘို့လိုအပ်ကြောင်းဖယ်ရှားပစ်ပါလိမ့်မယ်။
လွန်စွာလိုလားသော S4 နှင့် လွန်စွာလိုလားသော S1
အသစ်ဖြန့်ချိအဆိုပါ လွန်စွာလိုလားသော S4 ၏တန်ခိုးနှင့် Workflows ဆောင်တတ်၏ လွန်စွာလိုလားသော'' s ကိုစက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် Pro ကို Tools များ | ဘတ်ဂျက်-သတိအသံပညာရှင်များမှ S6 ထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင်နှင့်တစ်ဦး Ergonomics ပိုမိုကျစ်လစ်သိပ်သည်းအထုပ်ထဲမှာနှစ်လယ်ပိုင်းအရွယ်အစားဂီတနဲ့ audio post ကိုအဆောက်အဦမှအသေးစား။ အဆိုပါ S4 Pro ကို Tools များ, Nuendo နှင့် Pyramix ထံမှ Logic Pro ကို, Cubase နှင့်အခြားအသံ software ကိုမှဒေါ် -enabled ဆို EUCON ™နဲ့ပေါင်းစပ်အတွေ့အကြုံကိုပေးစွမ်းသည်။ IBC မှာ, လွန်စွာလိုလားသော အဆိုပါ၏ဘေးထွက်-by-side နှိုင်းယှဉ်ပြပါလိမ့်မယ် လွန်စွာလိုလားသော S4 နှင့် လွန်စွာလိုလားသော Dolby Atmos များအတွက်ဖော်စပ် S6 ။
အဆိုပါမကြာမီ-to--ကိုအပ်ခံရ လွန်စွာလိုလားသော S1 အသံပညာရှင်များလက်-on ကိုအမြန်နှုန်း, တိများနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်ပိုကောင်း-မြည်ရောသမမွှေများကယ်နှုတ်တော်မူဖို့လိုအပျ software ကိုပေါင်းစပ်ပေးသည်။ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ပုဒ်ကနေစတီရီယိုသို့မဟုတ်ပတ်လည်အတွက်ဖော်စပ်ခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်ဖို့, S1 ဆိုအသံလုပ်ငန်းအသွားအလာအရှိန်အဟုန်မြှင့်ဖို့ပြည့်စုံသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အမြင်အာရုံတုံ့ပြန်ချက်ပေးစွမ်းသည်။
လွန်စွာလိုလားသော အမှုဆောင်အရာရှိအပါအဝင် IBC 2019 စဉ်အတွင်းအစည်းအဝေးများစကားပြောတစ်စီးရီးတွင်ပါဝင်ပါလိမ့်မယ်:
Greg "Stryke" ချင်းပြည်နယ်, အသံကုနျပစ်စညျးသာသနာပွုဆရာမှာ လွန်စွာလိုလားသော, ဇာတိစွဲငြိဖွယ်ရာအသံထုတ်လုပ်မှုအကြောင်းကိုပြောမည်သူကို: အမှာခေတ်မီကြည့်ရှုသူ captivating IABM 8-40 ထံမှအနာဂတ် Trends ပြဇာတ်ရုံ (ခန်းမ 11, F11 ရပ်): တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 20 အပေါ် 15 နံနက်;
join မည်သူ Rocketman ဂီတအယ်ဒီတာအန်ဒီပက်တာ, လွန်စွာလိုလားသော'' s ကို Matt Feury သည် IBC Big မျက်နှာပြင်မှာအကြီးတန်းဒါရိုက်တာ, အဆိုတော်ဆက်ဆံရေး & ကိုးကားစရာစျေးကွက်တစ်ခုဂီတ masterclass မှတဆင့်တက်ရောက်ယူ: Rocketman: 1 ထံမှဂီတ၏ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်: 45-2: သောကြာနေ့ 30 ညနေ, ထိုအတွက်စက်တင်ဘာလ 13 ခနျးရေးစင်တာ; နှင့်
လည်း join မည်သူOscar®-အနိုင်ရအယ်ဒီတာခရစ်ဒစ်ကင်း, လွန်စွာလိုလားသော'' s ကို Matt Feury Rocketman များအတွက် IBC Big မျက်နှာပြင်မှာ: အပြင်ဆင်ရန်၏ပုံပြင်ကိုသူ2ထံမှကောင်းချီးအတ္ထုပတ္တိဂီတ၏စစ်မှန်တဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဖန်တီးအကူအညီပေးခဲ့ပုံကိုဆွေးနွေးခြင်း: 45-3: သောကြာနေ့, ထိုဇာတ်ရုံစင်တာကိုစက်တင်ဘာ 30 အပေါ် 13 ညနေ။
IBC တက်ရောက်အပြည့်အဝအကွာအဝေးစူးစမ်းဖို့ဖိတ်ခေါ်နေကြသည် လွန်စွာလိုလားသော ဖြေရှင်းချက်နဲ့ IBC မှာဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ဆန္ဒပြပွဲများကိုတွေ့ကြုံခံစား, 7.B55 ရပ်တယ်။ အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက လွန်စွာလိုလားသော ဆန်းသစ်တီထွင်မှု, www သွားရောက်ကြည့်ရှု။လွန်စွာလိုလားသော.com ။
လွန်စွာလိုလားသော အများဆုံးဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ထိရောက်သောမီဒီယာပလက်ဖောင်းပူးပေါင်း, ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ဖြန့်ဖြူးခြင်း, သုံးစွဲမှုနှင့်အတူအကြောင်းအရာဖန်တီးမှုကိုဆက်သွယ်ထားသော, ကယ်တင်တတ်၏။ လွန်စွာလိုလားသော'' s ကိုဉီးဖောက်သည်အသိုင်းအဝိုင်းအသုံးပြုမှု လွန်စွာလိုလားသော'' s ကိုပြည့်စုံကိရိယာများနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်အများဆုံးစောင့်ကြည့်ဖန်တီးဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ငွေရှာခြင်းချစ်နှင့်မီဒီယာစကားကိုနားထောငျထဲမှာကမ္ဘာ့ထံမှဂုဏ်သတင်းနှင့်ဆုရ feature ကိုရုပ်ရှင်လူကြိုက်များရုပ်မြင်သံကြားရှိုးများ, သတင်းအစီအစဉ်များနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအားကစားဖြစ်ရပ်များနှင့်တေးဂီတအသံသွင်းကျင်းပ နှင့်တိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေပွဲ။ အများဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြန့်ကျက်ခြင်းနှင့်စျေးနှုန်း options များနှင့်အတူ, လွန်စွာလိုလားသော'' s ကိုစက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်ဖြေရှင်းချက်မီဒီယာComposer®, Pro ကိုTools®, ပါဝင်သည် လွန်စွာလိုလားသော NEXIS®, MediaCentral®, iNEWS®, AirSpeed®, Sibelius®, လွန်စွာလိုလားသော ကစားရန်နေရာ™, FastServe®နှင့် Maestro ™။ အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက လွန်စွာလိုလားသော ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ, အလည်အပတ်ခရီး www ။လွန်စွာလိုလားသော.com, အတူ ချိတ်ဆက်. လွန်စွာလိုလားသော Facebook က, Instagram ကို, Twitter Youtube, Linkedln, သို့မဟုတ်စာရင်းသွင်းအပေါ် လွန်စွာလိုလားသော ဘလော့များ။
© 2019 လွန်စွာလိုလားသော နည်းပညာ, Inc All rights reserved ။ လွန်စွာလိုလားသော, အ လွန်စွာလိုလားသော လိုဂို, လွန်စွာလိုလားသော NEXIS, FastServe, Airspeed, iNews, Maestro, MediaCentral, မီဒီယာ Composer, Pro ကို Tools များ, လွန်စွာလိုလားသော ကစားရန်နေရာနှင့် Sibelius အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်၏မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်များမှာ လွန်စွာလိုလားသော နည်းပညာ, Inc ဒါမှမဟုတ်ယူနိုက်တက်စတိတ်နှင့် / သို့မဟုတ်အခြားနိုင်ငံများ၌၎င်း၏လုပ်ငန်းခွဲများ။ အားလုံးသည်အခြားအမှတ်တံဆိပ်ဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြသည်။ ကုန်ပစ္စည်း features တွေ, သတ်မှတ်ချက်များ, စနစ်လိုအပ်ချက်များကိုနှင့်ရရှိနိုင်မှုအသိပေးစာမပါဘဲပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။
အော်စကာ Motion Picture ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံအကယ်ဒမီ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသားဖြစ်ပါတယ်။
အနီရောင်လော်ရီကုန်အဝါရောင်လော်ရီကုန် (လွန်စွာလိုလားသော'' s ကို PR စနစ်အေဂျင်စီ)
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ လွန်စွာလိုလားသော ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပေါင်းစည်းမှု isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော post ကိုထုတ်လုပ်မှု SJGolden - လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် 2019-09-11
ယခင်: Sohonet Apple ကတီဗီများအတွက် ClearView Flex ကို App ကိုစတင်ရန်ရန်
နောက်တစ်ခု: IBC2019 မှာထုတ်လုပ်မှု Workflows အတွက် SRT ၏နည်းပညာကို Preview နှင့် Haivision SRT Hub တင်ပြ avid